Indlela uYesu awayefundisa ngayo ukuthandaza Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Indlela uYesu awafundisa ngayo ukuthandaza. Njengoko sele sazi, UYesu wayesisithethi esikhethekileyo. Ngeemfundiso zakhe ngemizekeliso, waxelela iinyani ezigqithileyo kwaye wakhwankqisa abantu abaninzi. Kwahlanganisana kuye abantu abaninzi, ukuba bamve ethetha.
Ngaphandle kokwenza imimangaliso eshiye yonke into el mundo Emlonyeni evulekile, eyona nto yabamba uYesu yayiyindlela yakhe yokuthetha ngeemfihlelo zikaYise. Ngesi sizathu, abantu zange bambuza malunga nendlela abanokuyenza ngayo imimangaliso. Nangona kunjalo, ukuba babuza indlela abamele ukuthandaza ngayo ukuze basondele kuThixo.
Kufuneka siyiqonde loo nto umthandazo yindlela yokufikelela kuThixo. Ke ngoko, uNyana wakhe wasibonisa indlela eyiyo yokuthandaza ukuseka unxibelelwano ngqo noPhezukonke.
Ukwazi indlela uYesu awayefundisa ngayo ukuthandaza, kufuneka sibuyele kowona mthombo unokuthenjwa wamazwi akhe: iBhayibhile. Emva koko, siza kukubonisa onke amanyathelo ekufuneka siwalandele ukwenza umthandazo ochanekileyo. Ngaba siza kuqala?
1 Indlela uYesu awafundisa ngayo abafundi bakhe ukuba bathandaze
1.1 1. Thandaza wedwa uthe cwaka. Indlela uYesu awafundisa ngayo ukuthandaza
1.2 2. Cengceleza uBawo wethu osuka entliziyweni
1.3 3. Thandaza ngokunyanisekileyo
Indlela uYesu awafundisa ngayo abafundi bakhe ukuba bathandaze
1. Thandaza wedwa kwaye uthe cwaka Indlela uYesu awafundisa ngayo ukuthandaza
Kule ndawo, uYesu usixelela ukuba uThixo akabathandi abantu abathandaza esidlangalaleni ukuba benze ngathi. Ngokuchasene noko, qaphela oko Umthandazo kufuneka ube ngowobuqu kwaye usondele ekomelezeni ubudlelwane kunye noBawo wethu wasezulwini. Ngale ndlela, uThixo uya kuyiqonda into yokuba uyenza ngokunyaniseka, ayenzeli abanye ukuba bakubone uyenza. Into ebalulekileyo ayisiyiyo into ecingwa ngabanye, kodwa yindlela oziva ngayo ngaphakathi.
«Naxa sukuba uthandaza, musa ukuba njengabahanahanisi; Ndikufungisa ukuba sele bawufumene umvuzo wabo. Ke wena, xa uthandazayo, ngena egumbini lakho, uluvale ucango, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni; aze uYihlo obona emfihlekweni akubuyisele ekuhleni.
2. Cengceleza uBawo wethu osuka entliziyweni
UYesu wamisela umthandazo ukuze asifundise ukuthandaza. Utata wethu. Umthandazo unamacandelo amabini apho sidumisa khona uThixo, emva koko simcele ukuba asincede kwezona zinto zibalulekileyo ebomini bethu. Xa sigqibile, kufuneka sithi Amen (Makube njalo). Ngele ndlela, UThixo wayeyiphendula imithandazo yethu.
Ungasingenisi ekuhendweni, kodwa sihlangule enkohlakalweni; ngokuba bobakho ubukumkani, namandla, nozuko, ngonaphakade. Amen.
UMateyu 6: 9-13
3. Thandaza ngokunyanisekileyo
Isivakalisi akufuneki sibe siseti yamagama enkqaya. Xa uYesu wafundisa abafundi ukuba bathandaze, akazange afundise umthandazo obizwa ngokuba nguBawo wethu, othatha imizuzwana eli-15 ukuya kwamashumi amabini ukuphindaphinda. Wasifundisa ukuba thandaza ngentliziyo, ngendlela efanayo xa unyana ethetha kuyise ecela uncedo. Ke ngoko, Xa ugqiba uBawo Wethu Osezulwini kwaye uthi "Amen," qhubeka uthandaze ngawakho amazwi.
Xa uthandaza sukuphindaphinda into engento, njengeeNtlanga, ezicinga ukuba ngentetho yazo ziya kuva. Musani ke ukufana nabo; kuba ekwazi uYihlo enikusweleyo, ningekamceli.
UMateyu 6: 7-8
Thandaza wedwa kwaye uthe cwaka, funda uBawo wethu ngokusuka entliziyweni, uthandaze ngokunyanisekileyo.
Isivakalisi esifanelekileyo asisekelwanga ekuthetheni awona mazwi amnandi. Abantu abaninzi banomdla wokuthetha. Nangona kunjalo, indumiso egqibeleleyo yile iphuma entliziyweni yethu ifom inyanisekile, ilula kwaye ithe ngqo. Leyo yindlela eyiyo yokukholisa uThixo.
Siyathemba ukuba eli nqaku lifutshane indlela uYesu awafundisa ngayo ukuthandaza, akuncede uqonde ukuba umthandazo kufuneka wenziwe njani ukuze uThixo ayiphendule imithandazo yakho. Ukuba ngoku ufuna ukwazi izinto ezingaphaya kobomi nomsebenzi kaYesu, okanye zibuze kwakutheni ukuze uThixo amshiye uYesu emnqamlezweni, Sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.